Ukwehlisa i-TIG MIG MAG ELEKTROD imfundo yesikhathi esithile i-Antwerp
Sakha iron uma kushisa
Ufunda i-electrode welding, i-MIG MAG ne-TIG emotweni yokudonsa ipayipi. Ufunda ukuthi ungasebenzisa kanjani imishini yokuhlunga ehlukile futhi wenze ipayipi kanye ne-tube connections. Ufunda ukusebenza ngokunembile ukuvimbela amaphutha wokudonsa nokuphazamiseka nokubona izinhlobo ezahlukene zensimbi ezifana nensimbi, insimbi engagqwali, ...
Kumalensi wezinkinobho zemodemu wena ngokukhethekile ekulungiseni zonke izinkinga ezingenzeka eziqukathi. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa amasu afanayo owazifunde ku-pijzenen ye-module.
Sinikeza ukuqeqeshwa kwe-welding ngenqubo emibili. Ukufunda okubili kusho ukuthi ufunda ukuhweba kwakho kokubili esikoleni nasemsebenzini. Uzokhokhwa futhi ngezinsuku zakho zokusebenza. Uma usuqedile, ungaqinisekisa umqashi wakho wesikhathi esizayo ngesipiliyoni esiwusizo osuvele unayo.
Uthanda ukusebenza ngezandla zakho
I-welding yokuqeqeshwa idinga isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uqala emodini ye-pijzen.
Ngesitifiketi se pijplassen Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza okukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza kuso i-container lens.
Ukwehliswa yi-profession bottleneck futhi ngakho-ke kukhathazeka kakhulu ngemakethe yezabasebenzi.
Akufanele ube nokuqonda okukhethekile kwenkambo ye-Lassen. Ikakhulukazi isifiso sokusebenza ngensimbi kubalulekile.
Njengenkundla uvame ukusebenza esiteshini se-laser lapho ungasebenza khona ekwakheni okuhlukene, njengezitebhisi, ama-balustrade, amasango, ... Ungakwazi ukujoyina umkhakha wezimboni lapho ungasebenza khona kumaphrojekthi ahlukahlukene. Ungaphinda usebenze njenge-welder esangweni lapho iziqukathi zakho zizobuyiselwa khona.
I-welder iyimisebenzi yokugubha. Ngakho-ke ungathola umsebenzi ngokushesha nge-diploma yokudonsa. Inzuzo yukuthi usuvele wakha isipiliyoni somsebenzi esifanele ngaphakathi kwe-Learning + Work. Lokhu kuyinzuzo enkulu ngoba abaqashi bafuna lokhu.
Namuhla akulula ukuthola i-welder enekhono. Lezi izindaba ezimbi zabaqashi, kodwa izindaba ezinhle kakhulu ukuthi ubani ongajoyina imakethe yomsebenzi ngale phrofayela.
Uma usuqedile ngempumelelo ukuqeqeshwa kwe-welder polyvalent, uzothola isitifiketi solwazi lobuchwepheshe be-MIG / MAG noma i-TIG welding. Ngalokhu uzibeka ngokuqinile emakethe yomsebenzi.
Yini i-welder efanelekayo?
Ngemuva kokuphothula, uhola nge-2140 euro eningi njenge-welder esigcwele.
Ngokuvamile uzosebenza emva kwalokhu kuqeqeshwa.
Kodwa ngezinga lesibili ungaqala emfundweni ephakeme. Uma usafuna ukufunda ngokuqhubekayo, sicela usitshele ku-CLB. Kuye ngezinga le-student, kunamathuba okukhetha: isib. Ku-Adult Education, ku-VDAB, Syntra, ...
Isibonelo, ungaqhubeka ukuphothula i-photocassette, i-laser yangaphansi kwamanzi, i-welding ekhethekile ye-metal, ...
Ukuqeqesha nge-e-time welding semfundo ngokuningiliziwe
Ukwehliswa kuyindlela yokuxhuma izingxenye zensimbi. Kunezindlela ezihlukahlukene zokwelusa.
I-welding ye-TIG yilezi zindlela ezisetshenziselwa ukufudumala kakhulu. Kuyindlela enzima kakhulu yokwelusa. Embonini, ungasebenza nama-weld wig Tig ngoba ufezekisa ngokucacile kakhulu ngale ndlela yokudonsa.
Sifunda ukuthi singasebenza kanjani ngokuzimela ekwelweni. Ukufundiswa kwemali emfundweni yesikhathi esithile kuhlanganisa kokubili okuhlangene kwekhoneni, ipuleti elimnandi kanye namajoyina amancane.
Ukwakhiwa kwe-welding tig i-part-time education - I-LASSEN mig mag tig i-semi-machine
Uhlelo 'Welder-Welding"siqukethe okulandelayo Amamodeli we-3:
Siphinde sikufundise welding nge electrode yokugqoka, nge-MIG-MAG; futhi ubizwa ngokuthi umshini ozenzakalelayo.
Ukuqeqeshwa kwe-welding kuhilelani na?
isisekelo kolwazi ngogesi kanye nokusebenza ngesimbi;
ukusebenza ngokuphephile nama-lorries;
Ulwazi oluthe xaxa mayelana nenqubo ethile yokufakelwa kwe-welding: TIG noma iMIG / MAG noma welding semi-othomathikhi;
Usebenza ngejubane lakho ngesikhathi sakho ngasinye.
Uya kuphi emva kokuqeqeshwa?
Ngesitifiketi se-welder usabela ekufuneni okuphezulu emakethe yomsebenzi;
Ungaqhubeka ngokukhethekile ngamasu athile (ukudonsa i-arc, welding semi-othomathikhi noma i-TIG welding);
Uyakwazi ukuthola umsebenzi ekhamphani yokwakha imishini, e-petrochemchem, ekuthumeleni, emkhakheni wezimoto, noma enkampanini ye-welding;
Kunesidingo esikhulu sama-welders amahle (umsebenzi we-bottleneck!). E-Antwerp, unjenge-welder enekhono, uqiniseke kakhulu ngomsebenzi ohloniphekile, okhokhelwa kahle. Uma unesifiso sokwelusa futhi ungathanda nokuthola i-degree yezemfundo yesibili, ukuqeqeshwa nakanjani into kuwe.